Fandriampahalemana eto an-drenivohitra: nanao bemidina tamin’ireo faritra mena ny “patrouille militaire” | NewsMada
Niainga teny Analakely, nahazo an’Ampasampito sy Ambodivona, nandalo an’i 67 Ha sy Anosibe, nipaka teny Anosizato, izay samy faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana eto an-drenivohitra ny bemidina, fisafoana ireo faritra mena nataon’ny miaramila mpanao “patrouille militaire”, afakomaly alina.
Nanao hetsika fisafoana ireo faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana eto an-drenivohitra, afakomaly alina ny teo anivon’ny kaomandin’ny faritany miaramila voalohany (1/RM1) notarihin’ny Jly Rabenaivoharivelo. Niainga teo Analakely izany ka nihazo teny Ampasampito nahitana ireo “patrouilles militaire – PM” misahana ny fitandroana ny filaminana amin’iny faritra iny sy ny manodidina. Nidina teny Ambodivona avy eo. Nambaran’ny kaomandà Ravalison Mario avy ao amin’ny Rezimantan’ny andry sy tohana (RAS) lehiben’ireo PM fa miisa 10 ireo misahana ny fisafoana amin’iny faritra Ambodivona iny. Ao ireo miambina ny toerana saro-pady misy ny tranon-jiron’ny Jirama. “Mpanendaka no tena maro amin’iny faritra iny ka izay tratra dia Misy koa ireo olona tratra hariva ka mangataka fiaraha-miasa aminay ka aterinay avy hatrany any amin’ny polisy izy ireny mba ho fiarovana ny ainy”, hoy ity manamboninahitra ity. Nitohy ny fisafoana ka tonga teny Antanimena, ao anatin’ny faritra iadidian’ny 1/RM1. Hatrany 67 ha, iandraiketan’ny avy ao amin’ny Rezimantan’ny aro anabakabaka (R3A) notarihin’ny Kly Faly. “Mizara roa ireo miaramila mpanao fisafoana: misy ireo manao fisafoana alohan’ny misasakalina ary misy kosa ireo aorian’ny misasakalina mandra-paharain’ny andro”, hoy izy. Mitsofoka elakela-trano mihitsy ireo mpanao fisafoana satria iny faritra 67 ha iny rahateo, isan’ny faritra mafam-pana ka mahatonga ireo miaramila mpanao fisafoana tsy mandry andro tsy mandry alina amin’ny fanenjehana ireo jiolahy. Miditra amin’ny fanakatonana ireo toeram-pisotroana zava-pisotro misy alikaola tsy mikatona amin’ny ora voatondro koa ireo PM satria ireny rahateo no isan’ny mitarika tsy fandriampahalemana. Amin’ireny toerana ireny rahateo no fanomanan’ireo olon-dratsy ny asa ratsin’izy ireo matetika ka tsy maintsy mandray fepetra amin’ny fanakatonana ireny bar ireny ny (PM).
Misy ny fiaraha-miasa amin’ny polisy sy zandary…
Nifarana teny Anosibe hatreny Anosizato sy ny manodidina ny fisafoana satria faritra isehoana asan-jiolahy matetika koa ny eny. Madera Namontana, Soanierana hatrany Tanjombato ny faritra iadidian’ireo PM. Miasa 24 ora amin’ny 24 ora sy mandritra ny fito andro izy ireo amin’izany. “Efa fanao mahazatra eto amin’ny faritanin’Antananarivo ny fisafoana toy izao ary tsy hoe amin’izao ankatoky ny fifidianana izao fa mitohy hatrany ny asan’ny mpitandro filaminana. Misy ny ivontoerana manokana ao amin’ny 1/RM1 miara-miasa amin’ireo miaramila eny an-kianja. Misy koa ny fifanomezan-tanana amin’ny polisy sy zandary satria tombontsoa iraisana no tadiavintsika mba hisian’ny fandriampahalemana”, hoy ny kaomandin’ny faritany miaramila voalohany. Nambaran’ity manamboninahitra ambony ity fa efa mihena ny tsy fandriampahalemana noho ny ezaka ataon’ireo mpitandro filaminana eo ambany fifehezany.